6 Layli ka dhan ah Plantar Fascitt [Jimicsiyada Dhab ahaan Caawiya]
6 Layli ka dhan ah Plantar Fascitt
24 / 03 / 2016 /0 Comments/i Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog, iskala Layliyo/av waxyeelladayda
Ma ku taabataa miraha lugta ee lugta lugta? Halkan waxaa ah 6 jimicsi oo bixin kara labadaba hagaajin wax ku ool ah iyo xanuun joojinaya. Maanta ka bilow!
Waxaan sidoo kale soo lifaaqnay fiidiyow muujinaya sida dhowr ka mid ah loo sameeyo.
Waa maxay plantar fascite?
Plantar fascia waa culeys xad dhaaf ah oo ku yaal saxanka muruqyada cagta hoosteeda - oo loo yaqaan 'plantar fascia'. Culeyska xad dhaafka ah wuxuu sababi karaa dhaawac iyo caabuq ku dhaca unugyada muruqyada taasoo salka u dhigeysa xanuunka hore ee ciribta. Badanaa waxay aad u xanuun badan subaxa marka aad qaaddo talaabooyinkaaga ugu horeeya. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qaybo ka mid ah fal-celinta caabuqa ee sida caadiga ah sameysma ay tahay jawaab-celinta bogsashada jirka - iyo in daraasado dhowr ah ay muujiyeen in daawooyinka NSAIDS ay u horseedi karaan bogsiin aad u gaabis ah.
Qaar badan ayaa ka fiicnaan doona waqti ka dib, laakiin daweyn la'aan waxay run ahaantii qaadan kartaa illaa 1-2 sano. Tani waa sababta oo ah jirku wuxuu ku adkaadaa inuu jebiyo unugyada dhaawaca soo gaadhay kuna beddelo unugyada caadiga ah. Nasiib wanaag, waxaa jira daaweyn si fiican loo diiwaangeliyay sida Shockwave Therapy og daaweynta laser. Hababka kale ee daaweynta waxaa ka mid ah isticmaalka sharaabaad riixo, kabo leh barkinta ugufiican, insoles iyo layliyo. Waxaad sifiican uga baran kartaa qodobkaan dambe - iyo fiidiyaha hoose.
VIDEO - 6 Jimicsi oo ka dhan ah cudurka loo yaqaan 'Plantar Fascitis':
Xor baad utahay inaad isqorto kanaalkeena YouTube wixii ku saabsan cusbooneysiinta caafimaadka iyo barnaamijyada jimicsiga.
1. Jimicsiga dharka Plantar fasciae
Koox cilmi baaris ah (1) Loogu talagalay barnaamij fidinta saxanka murqaha ee cagta hoosteeda (plantar fascia). Jimicsiga fidinta, sida ka muuqata sawirka kore, wuxuu ka koobnaa in la dhigo lugta lugta ku leh tan kale - ka dibna loo kala bixiyo dhinaca hoose ee cagta adoo jiidaya qeybta hore ee kubada cagta gadaal. Tan waa in laga dareemo cagtiisa cagteeda iyo ciribta.
Daraasadda, bukaanka waxaa loo sheegay inuu isku kala bixiyo 10 ilbidhiqsi 10 jibbaar - ilaa 3 jeer maalintii. Marka 30 ayaa wadarta guud. Beddelka ayaa sidoo kale loo kala bixiyaa 30 ilbiriqsi oo ka badan 3 qaybood.
2. Dharka jimicsiga ee dhabarka lugta
Dhabarka dambe ee kubka waxaan ka helaynaa musculus gastrocsoleus - muruq inta badan noqda mid aad u adag oo kacsan haddii aad qabto fasciitis plantar. Sababta ay u xanaaq badan tahay ayaa ah in dhirta dhirtu ku dhacdo ee loo yaqaan 'plantar fascia' iyo 'gastrocsoleus' ay caadi ahaan u wada shaqeeyaan si ay u qaybiyaan culeyska. Markuu plantcia fascia noqdo mid xanuun badan, mid ayaa si toos ah u bilaabi doona inuu culeys ka badiyo kubka halkii.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in muruqa kubka si joogto ah loo kala bixiyo. Kala bixi dhabarka weysha 30 ilbidhiqsi 3 nooc - labada dhinacba.
3. Jimicsiyada iyo tababarka si loo yareeyo plantar fascia
Saaxiibadeena deenishka ah ee qaaliga ah ee jaamacadda Aalborg waxay ku soo gabagabeeyeen daraasad cilmi baaris ah in tababar gaar ah oo xoog leh uu waxtar u leeyahay ka hortagga fasciitis plantar. Waxay ujeedkoodu ahaa inay xoojiyaan muruqyada dambe iyo hore ee tibialis, iyo sidoo kale peroneus oo lagu daray gastrocsoleus si loo yareeyo saxanka murqaha ee ka hooseeya cagta. Gabagabadoodu waxay ahayd in qofku si gaar ah diiradda u saaro wiishashka suulasha iyo jimicsiga soo noqoshada haddii qofku doonayo inuu xoojiyo cirifka cagta - oo uu yareeyo dhirta dhirta.
Sawirka hoose waxaad ku arkeysaa noocyo gaar ah oo ah suul qaadis oo ku habboon kuwa qaba fascitis plantar.
Tababbarka dhirta dhirta gaarka ah - Sawirka Mrathlef
4. Cagaf kor u kaca
Dadka badankood way yaqaanaan layligan - laakiin intee inteen le'eg baa isku mashquuliya inay sameeyaan? Jimicsiga iyo dhaqdhaqaaqa waa u muhiim dhammaan dhaqdhaqaaqyada, markaa hadda bilow. Daraasadda Jaamacadda Aalborg, waxay sidoo kale ku soo gabagabeeyeen inaad isticmaali karto boorsada dhabarka ama culeyska miisaanka si aad saameyn badan uga hesho jimicsigan caadiga ah. Waxaan kugula talineynaa inaad bilowdid dhabarka la'aan halkii aad si tartiib tartiib ah naftaada u dhisi lahayd.
5 iyo 6. Layli jimicsi iyo jimicsi Carabi
Rogitaanku waa dhaqdhaqaaqa halka lugta lugtu ay u jiideyso gudaha. Marka waxaad sameyneysaa jimicsi rogaal celin ah adiga oo fadhiisanaya ka dibna lugahaaga si toosan hortaada u hor dhigaya - ka hor intaadan cagahaaga u kala jiidan midba midka kale. Layliga ayaa sidoo kale lagu samayn karaa iyadoo laastik ah si loo helo culeys badan inta lagu jiro waxqabadka.
Miyaad qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan layliyada ama ma u baahan tahay talooyin dheeri ah oo ku saabsan dhibaatada, iyo xanuun aad u xanuun badan, xaaladda fasciitis plantar? Si toos ah na weydii annaga adoo usameeya facebook page.
TALO: Dad badan ayaa sidoo kale isticmaala sharaabaad cufan plantar fasciitis si loo kiciyo wareegga oo u milmaan caleemaha cagaha adag. Kuwani waxay kuu noqon karaan ikhtiyaar wanaagsan adiga oo ku dhibaya noocyada ugu muhiimsan ee fasciitis plantar.
PAGE xiga: - Ma isku dayday daaweynta mowjadaha cadaadiska?
Daaweynta mowjadaha cadaadiska waa daaweyn la taaban karo oo waxtar leh oo loogu talagalay dhirta fascitis.
Guji sawirka kore si aad wax badan uga aqriso wax ku saabsan daaweynta mawjadda cadaadiska.
Weedho-raadinta kale ee caan ah ee la adeegsaday iyo kuwa caan ah ee maqaalkan: layliyo fasciitis ah, layliyo fasciitis ah, layliyo fasciitis ah, layliyo fasciitis ah
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/4-øvelser-mot-plantar-fascitt.jpg?media=1648573622 368 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-03-24 08:13:352021-03-25 18:30:186 Layli ka dhan ah Plantar Fascitt
- Ma leedahay lugo aan nasanayn? Madax xanuunka noocee ah ayaad qabtaa?